ပါဝါ:18.5KW + 0.75KW + 0.4KW အဆင့်သုံးဆင့်
floating ၏ဤအမျိုးအစား ငါးအစာကျွေးခြင်း extrusion စက် ငါးအမျိုးအစားများအတွက်စိုစွတ်သောနည်းလမ်းအမျိုးအစားအစာကျွေးသော extruding စက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်, ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်ကြီးမားသောအစာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်,ဤအမျိုးအစားငါးအစာဖြန့်ဖြူးစက်သည်အချင်း ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာရှိသောရေပေါ်ငါးအစာလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရန်သက်ဆိုင်သည်, ငါးအစာတောင့်, ပုစွန်အစာနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်အစာ,ရေပေါ်အမျိုးအစားငါးအစာကျွေးခြင်း extruder စက်မှလွဲ။, ကျနော်တို့နစ်မြုပ်အမျိုးအစားရှိသည် တောင့်စက်ကိုအစာကျွေး နစ်မြုပ်လုံးလေးများအောင်သည်.
၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ, စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာထုတ်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ရေနွေးငွေ့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ထားသည်. ဒါဟာအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် aqua feed ကိုရေပေါ်သို့မဟုတ်နစ်မြုပ် ငါးဘို့, ငါးရှဉ့်, ပုစွန်, ဂဏန်း, ။ ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ကြောင်များအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် feeds အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ခွေး, စသည်ဖြင့်. တောင့်သည်အရွယ်အစားမှာ ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာမှအမျိုးမျိုးသောငါးများကိုကျွေးနိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, စိုစွတ်သောအမျိုးအစားနစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ရေပေါ်ငါးအစာကြေထုတ်စက် အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
Floating Fish Feed Extrusion စက်၏အားသာချက်များ
even ညီတူညီမျှနှင့်အစဉ်မပြတ်အစာကျွေးခြင်း: Transducer မှထိန်းချုပ်ထားသောပြားချပ်ချပ်ခြစ်စက်နှင့်အအေးခံကိရိယာများသည်ပစ္စည်းများအားအညီအမျှနှင့်အဆက်မပြတ်ကျွေးမွေးနိုင်သည်.
◆မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်: အေးစက်နှင့်အတူ, ရေနွေးငွေ့နှင့်ရေကိုအထူးယန္တရားမှတစ်ဆင့် extruding chamber ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထိုးသွင်းနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်ပမာဏကိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောကြောင့်များစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်.
quickly လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန်စွာဖြတ်တောက်ခြင်း: ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဖြတ်တောက်မှုယန္တရားသည်ဓါးများကိုကောင်းသော elasticity ဖြင့်အသုံးပြုသည်, အရာနူးညံ့သောသေပန်းကန်မှပူးတွဲပါနှင့်ခြောက်လလမ်းညွန်အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာ operated နိုင်ပါသည်.
◆သက်တမ်းပိုရှည်: ဝက်အူသော့ခလောက်နှင့်သေသည့်အရာများကိုလေဟာနယ်ကိုငြိမ်းအေးစေသောကုသမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်, ထို့အပြင်မြင့်မားသောအပြောင်းအလဲနဲ့တိကျစွာနှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌နှင့်ရှည်လျားသောအသုံးပြု။ အသက်ရှည်ရှိသည်.
◆လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှု: အားလုံးသော operating အစိတ်အပိုင်းများကိုရေနွေးငွေ့အဆို့ရှင်, စသည်တို့, လူသားဒီဇိုင်းကိုချမှတ်, အမှန်တကယ်စစ်ဆင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်.
●ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်တယ်, ဒီအစာကျွေးသော extrusion စက်သည်ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားငါးအစာစက်ရုံနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများအတွက်သင့်လျော်သည်.
●ငါးများအတွက်ရေနေအစာတောင့်များပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်, ပုစွန်, ဂဏန်း,စသည်တို့.
●စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာဖြုန်းစက်သည်ကြောင်များအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာများပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်, ခွေး, စသည်တို့.
# ရေပေါ်အစာကျွေးခြင်းနှင့်နစ်မြုပ်နေသောငါးအစာများကိုဤငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်, နှင့်ဤငါးအစာတောင့်စက်ကိုအများအားဖြင့်ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်.
●ငါးအစာထုတ်စက်၏ကုန်ကြမ်းများသည်ပြောင်းဖူးဖြစ်နိုင်သည်, ပဲပုပ်, ပဲပုပ်မုန့်ညက်, ဂျုံဖွဲ, ဆန်ဖွဲ, ငါးမုန့်ညက်, စသည်တို့.